Tamba Vavaki mahara kwenguva pfupi | IPhone nhau
Kuuya kwezhizha kunoreva kuti vana vedu vadiki vane ingangoita mwedzi mitatu yenguva yemahara yekunakirwa yezhizha apo kutambura kwedu kunowedzera zuva nezuva, kunyanya kana isu tisina rombo rakaringana kuve nenhengo yemhuri kana hama inokwanisa kutarisira vadiki kwemaawa mashoma pazuva.
Sezvakataurwa pane zvakapfuura zviitiko, kunyorera kwevana kunowanikwa muApp Store Vanotipa dzimwe nzira dzekuti vana vadiki vagone kuita zvese zvese needu iPhone kana iPad, pamusoro pekudzidza uchinakidzwa. Iyo yekuvandudza Toca Boca inyanzvi mukugadzira iyi mhando yekushandisa.
Uye zvakare mushambadzi Toca Boca ari kutipa imwe yeaya mafomu ekurodha pasi zvachose mahara kwenguva yakati rebei. Toca Builder ine yakajairwa mutengo we2,99 euros muApp Store. Tiri kutaura pamusoro peToca Builders, chishandiso umo vana vadiki vanofanirwa kugadzira nyika nyowani ine mabhuroko ayo anotibvumidza isu kuti tigadzire chero chinhu chinouya mukufunga kwedu.
Kubata Vavaki kunotibvumidza isu kuvaka nevashanu vane ruzivo vavaki:
Blox: Yakakura pakudonhedza uye kutyora matombo
Cooper: Anoshamisa pendi
Vex: Anoshamisa Kuisira Zvidhinha
Tambanudza: nyanzvi mukuisa mabhuroko kwese kwese
Connie: anonakidzwa nekusimudza nekufamba mabhuroko
Jum-Jum: Anoda kumwaya pendi
Main maficha eToca Vavaki
6 vavaki vakuru
Vaka izvo zvaunoda: donha, pfapfaidza, simudza uye pwanya!
Penda bhuru rimwe nerimwe sezvaunoda
Kudzora kwakasarudzika kwevavaki: kutenderera, kupeta, chinangwa uye kufamba
Sevha zvisikwa zvako nekusiya yako nyika uchishandisa yekumashure bhatani.
Shandisa iyo skrini basa kutora mufananidzo wezvisikwa zvako
Kid-inoshamwaridzika interface ine inoshamisa yekugadzira mikana
Anoshamisa ekugadzira mikana
Mifananidzo yakanaka yepakutanga
Hapana mitemo, kushushikana, kana nguva. Tamba chero zvaunoda.
Kwete mukati me-app kutenga
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Tamba Vavaki mahara kwenguva pfupi